सिर्जना सम्प्रेषण | सलामबिहानी
पाठकहरु आफ्ना रचानहरु comment मा submit गर्नुहोला ! (better if you send in unicode.)
salaambihani@gmail.com मा पनि पठाउन सक्नुहुनेछ
राम कुमार बुढा मगर, on June 4, 2010 at 2:16 pm said:
आँशु नबगाउ रोल्पा !
आँखा भरी आँशु देखाइ देखा परेको मेरो रोल्पा ।
दाजुभाइको युद्धलाई हेर्ने गरेको मेरो रोल्पा ।
तन्नेरी त बेपत्ता छन् बृद्ध आमा बाबा मात्रै,
आफ्नै मान्छे देखी पछी सरेको मेरो रोल्पा ।
गाउँबस्ती त खाली छन् खेतिबारी उजाड,
हत्या-हिम्सा नसही जिउदै मरेको मेरो रोल्पा ।
पवित्र ति जलजला शान्ती खोजी रोइरहेछ,
अशान्ती नसही एकातिर हरेको मेरो रोल्पा ।
कती आमा सन्तानबिहिन कती दिदी बिधुवा,
दाजुभाइको रगतले खरेको मेरो रोल्पा ।
बृद्ध ति बाबा आमा शान्ती खोजी रोइरहेछन्,
हत्या र हिम्साको बिउ छरेको मेरो रोल्पा ।
राम कुमार बुढा मगर गैरिगाउ-८ रोल्पा